detox ကုသမှု : သဘာဝကျကျ detox : detox အစီအစဉ်ကို : အိမ်ပြန် detox အစားအသောက်များတွင် - သဘာဝက detox ပရိုဂရမ်ပါးလွှာပြီးပြည့်စုံသော
ကျန်းမာတဲ့ detox အစီအစဉ်များ
ကျန်းမာတဲ့ detox အစီအစဉ်ကို
သဘာဝက detox အစီအစဉ်များကို
အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေးအစီအစဉ်မှ - ကျန်းမာရေးနှင့် Fit ကိုအကောင်းဆုံး Option ကိုရှာဖွေခြင်း Stay
ဒီအ Post ကိုမှ Listen
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးရရှိနိုင်အလေးချိန်သင်တန်းအစီအစဉ်ရှိပါက, သင့်ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏ပိုမိုမြန်ဆန်လုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်တို့အရိုးအတိအကျလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖျော်ဖြေနေဖြင့်အားကောင်းလာစေရန်.
အလေးချိန်လေ့ကျင့်ရေး၏အကျိုးကျေးဇူးများအကြောင်းပြောနေတာလာတဲ့အခါ, များစွာသောလူသည်ဤများ၏အားသာချက်ယူရန်စတင်. ယနေ့ခေတ်, အားကစားသမားသင်တန်းဒီ type ကနေအကျိုးအမြတ်ကြသည်သာ. ယခုကျန်းမာကြွက်သားတွေဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ခြင်းနှင့်ခန္ဓာကိုယ်ထဲမှာမလိုချင်တဲ့အဆီပပျောက်ရေးဖို့ဒီပရိုဂရမ်ကိုသုံးပြီးနေကြတယ်တောင်မှပျမ်းမျှအားဖြင့်ရှေးရှေး.
သငျသညျကိုအကောင်းဆုံးအလေးချိန်သင်တန်းအစီအစဉ်ရှိပါက, သင့်ခန္ဓာကိုယ်က၎င်း၏ပိုမိုမြန်ဆန်လုံနှင့်ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာအစွမ်းသတ္တိကိုတိုးတက်ကောင်းမွန်. ဖြည့်စွက်ကာ, သင်တို့အရိုးအတိအကျလုပ်ရိုးလုပ်စဉ်ဖျော်ဖြေနေဖြင့်အားကောင်းလာစေရန်. ကံမကောင်းစွာ, လူအခြို့တို့ကြောင့်အများလွန်းလေးရုပ်သိမ်းပေးရေး၏မလိုချင်တဲ့ဒဏ်ရာတွေ့ကြုံ. သငျသညျလေးလံသောအလေးချိန်ကိုမသုံးကြဘူးပင်လျှင်ကိုသတိရပါ, သငျသညျကနျြးမာသငျသညျစောငျ့ရှောကျဖို့အကောင်းဆုံးကြံ့ခိုင်ရေး regimen အောင်မြင်ရန်နိုင်ပါ.